Sida loo ciyaaro, Beddelaan, iyo Edit FLAC Faylal ay ku Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Play, Beddelaan, iyo Edit FLAC Faylal ay ku Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
1. Sida loo ciyaaro files FLAC on Mac for free
Ma taqaan sida loo ciyaaro files FLAC on Mac OS X (Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9 ka mid ah)? Tan iyo FLAC aan ay taageerayaan QuickTime, si aad u heli doonaa way ku adag tahay in ay u ciyaaro ciyaaryahanka rasmi Apple. Laakiin waxaad isticmaali kartaa ciyaaryahan fiican FLAC Mac inuu u ciyaaro ee files audio. Taasi VLC Media Player , taas oo ah ciyaaryahanka ugu awooda badan ee labada users Mac iyo Windows in ku dhowaad dhammaan ciyaari qaabab loo jecel yahay. Haddii aad loo isticmaalo in lagu isticmaalayo ciyaaryahan kuu gaar ah oo aan ku taageeri files FLAC, waxaad isticmaali kartaa awood Converter FLAC Mac si loogu badalo files FLAC u qaabab la jaan qaada ciyaaryahan aad ugu jeceshahay. Iyada oo taageero ka this Converter file FLAC, ciyaaro files FLAC on Mac (ama QuickTime) mar dambe ma aha wax adag.
2. Sida loo badalo files FLAC la Converter FLAC u Mac
Ma doonaysaa in loogu badalo files FLAC on Mac? A smart Converter file FLAC waa lagama maarmaan kuu ah. Mac Converter FLAC ugu fiican ee The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo files FLAC in qaabab badan oo maqal ah sida MP3, regelingen, AAC, M4A, AIFF iwm si fudud oo dhaqso, xitaa qaabka sameecadda Apple.
Sida ku caashaqi jiray ciyaartoyda la qaadi karo caanka ah sida iPod, iPhone, iPad, waxa ay u badan tahay noo si loogu badalo FLAC Mac qalabka si aan ciyaari karo files FLAC ah waqti kasta iyo meel kasta. Wakhtigan, taas Converter Mac FLAC (Mountain Libaaxa taageeray) wuxuu noqon karaa doorashada ugu fiican ee aad, diinta FLAC u Lugood, iPod, iPad, iPhone oo aan wax khasaare ah oo tayo leh maqal ah. Geedi socodka waa mid aad u fudud, kaliya qasabno yar.
Taageerayaan Mac OS: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
2. Mac Pro, Unibody Macbook, Mac Mini, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac iyo PC la Mac OS X.
3. Sida loo jar, jaray, files edit FLAC on Mac OS X
Tani dareen FLAC Converter Mac la sidoo kale loo isticmaali karaa sida editor FLAC wanaagsan. Haddii aad rabto in aad jar, gooyay files FLAC dhowr clips yar-size, oo ku milmaan clips aad doonayso galay mid ka mid weyn, aad u isticmaali karto si aad xaalkaa files FLAC sida ay baahidaada.
Aqoon Wadaag: waxa file FLAC ah
FLAC, gaaban Free sameecadda codec Audio, waa qaab file maqal ah sameecadda ah, taasoo la micno ah audio la cadaadiyo oo aan wax macluumaad ah oo khasaaro xogta laakiin size file waxaa uu hoos ugu 50-60% ka mid ah ay size asalka ah. Haddaba waxaa qoreysa size file sare oo tayo sare leh. FLAC ma aha qaab ku haboon ciyaaro ama lagu kaydiyo on Mac OS X. Ma waxaa la ciyaari karaan Lugood ama aaladaha la qaadi karo QuickTime, Apple sida iPod, iPad iyo iPhone.
Sida loo Beddelaan FLAC in Lugood on Mac (Yosemite ka mid ah)
Mac OS X 10.7 Libaaxa NEW Maqaallo, dhaqdhaqaajinta jirka Multi-Touch